udizili pellet mill,umshini owenza i-diesel pellet yokwenza umshini wokuphakela izinkukhu
Kuyaziwa ukuthi udizili pellet mill yisinqumo esihle kakhulu kubantu abafuna ukunciphisa izindleko ekusetshenzisweni kwamandla. Lolu hlobo lomshini we-diesel pellet liveza iqiniso lokuthi lingasetshenziswa ezindaweni eziningi ikakhulukazi ezindaweni ezikude lapho amandla engasebenzi.
Ngokuvamile, injini yedizili isetshenziswa emishini emincane ye-die die pellet futhi ukusetshenziswa kwayo kukhulu kakhulu. Ngabantu abaningi ngokwengeziwe yindlala yokusebenzisa i-pellet mill ukudala ukushisa emindenini yabo, ngakho-ke izidingo zam mill pellet ngenjini yedizili nazo ziyanda kulezi zinsuku.
Kungani Khetha Diesel Pellet Mill
1. Kubiza kakhulu
Intengo yemishini yeDiesel Pellet Mill ayisiyo izinkanyezi. Empeleni, abaninikhaya abaningi manje sebekwazi ukukhokha amamitha ayisithupha. Ukusetshenziswa okuncane kwezigayo zamadizili kusendleleni. Into okudingeka uyenze ukuthenga umshini wokwenza udizili enkampanini enegama elihle. Lokhu kuzoqinisekisa ukuthi uthola umshini omuhle kakhulu. Futhi kuzoqinisekisa ukuthi awuphanjwanga. Umshini wokwenza udizili ongayithenga uzokwanela zonke izidingo zakho ze-pellet ngokuphelele. I-Amisy izokwazi ukubona wonke umcabango wakho kuma mill pellet.
2.Akukho mkhawulo wamandla
Kunezinhlobo eziningi zemill ye-pellet emakethe: Iring die pellet mill kanye neFlat die pellet Mill. Iring die pellet mill iyimiklomelo esetshenziselwa ukukhiqizwa kwezimboni futhi ibiza kakhulu kuneshayela le-die pellet die. Ngebhizinisi elincane nokusetshenziswa kwasekhaya, i-flat die pellet mill ilungele intengo engabizi kakhulu kanye nomthamo ofanele wokukhiqiza.
Lapha sinikezela ngezinhlobo ezimbili zemishini eqhutshwa yi-flat die pellet: Kuqhutshwa ugesi futhi kuqhutshwa iDiesel. Zombili zilungele ukukhiqizwa kwasekhaya. Nali iphuzu eliyisihluthulelo lokukhetha i-Diesel pellet mill. Iqhutshwa yinjini yedizili, kwenza ukukhiqizwa kwama-pellets kwenzeke ikakhulukazi ezindaweni zasemakhaya ngokushoda kukagesi. Futhi udizili kulula kakhulu ukuthola cishe yonke indawo.
3. Elula ukusebenza epulazini eliseduze
Ngomshini weDiesel Pellet Mill, inqubo yokwenza ama-pellets ingaba lula kakhulu. Emuva ngemishini ye-1970 yokwenza izinto ezisetshenziswayo kwakusetshenziswa ngokuyinhloko ekwakhiweni kokuphakelwa kwezilwane, nokho, njengoba isikhathi sihamba, ukusetshenziswa okungaphezulu okungcono kwezigayo kwaqalwa ngemishini yemishini yedizili kusetshenziswa hhayi kuphela ekusetshenzisweni kokudla kwezilwane kepha nasemaphemeni ezinkuni angasetjenziswa njengamafutha ukufudumeza ikhaya. Ngokujwayelekile uphethiloli we-biomass uthathwe ngokungathi sína kakhulu kunangaphambili. Uzobona ukuthi abakhiqizi abancane kakhulu be-pellet bavame ukukhetha imishini yokusebenzisa udizili e-pellet.
Izinzuzo zeDizeli Injini Okuphakelayo Pellet Mill
1. Kuqhutshwa injini yedizili.
2. Ama-roller kanye nokufa kwenziwa ngezinto ezibonakalayo zensimbi ye-alloy, okwenza le ngxenye yomgogodla igqoke futhi kungabi lula ukuyaphula.
3. Kulula ukuthola izinto zokwakha: ukolweni, ukolweni, ubhontshisi, utshani, alfalfa, utshani, irayisi nokunye.
4. Ingenza ama-feed pellets enkukhu kanye nemfuyo, njengenkukhu, idada, unogwaja, ingulube, njll.
5. Ngokushintsha i-pellet mill iyafa, ungenza ama-feed pellets nge diameter ehlukene nge mill feed eyodwa ye-pellet.
6. Isicelo se-Heat noma i-steam ayidingeki ku-pelletizing. Ngaphandle kokufaka noma yisiphi isigaxa, ingacubungula ngokuqondile imiphako ye-mash ibe emigqonyeni.